Madagasikara: Nitono-tena ho filoham-pirenena ny Ben’ny tanàna · Global Voices teny Malagasy
Madagasikara: Nitono-tena ho filoham-pirenena ny Ben'ny tanàna
Voadika ny 31 Janoary 2009 20:26 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, Español, polski, English
Nivadika ho adim-pahefana hiandraikitra ho filoham-pirenena indray ny fifanandrinana misy eo amin'i filoham-pirenena Marc Ravalomanana sy ny Ben'ny tanàna Andry Rajoelina izay efa nampisaritaka ny Malagasy tao anatin'ny herisetram-pandrobana tamin'iny herinandro iny.
Nanetsika ny mpanohana azy i Rajoelina, DJ sy mpampiala voly lasa Ben'ny tanànan'Antananarivo rehefa nakaton'ny fitondrana ny televizionany VIVA. Ankehitriny moa dia tsy mitady ny hamerenana amin'ny laoniny ny demaokrasia sy ny fahalalaham-pitenenana ihany no takian'ny mpanaraka azy mahatratra an'aliny fa ny fitantanana ny fitondrana mihitsy.
Samy nandamoka (foana) avokoa moa ny fampihaonana indroa miantoana saiky natao ho an'ny roa tonta (Ravalomanana sy Rajoelina).
Hain'ny Ben'ny tanàna moa ny namadika ny tsy fahafalian'ny olona sy ny tsy fanekeny intsony ity fitondrana ity hanaraka azy amin'ny fitolomana. Tamin'ity Sabotsy ity, teo amin'ny Place du Treize Mai, teo anatrehan'ny olona an'aliny no nilazan'i Andry Rajoelina fa izy no mpitondra vaovaon'i Madagasikara.
Rehefa tsy nandray ny andraikiny ny filoha sy ny fitondrana notarihiny… dia ho raisiko an-tanana ny fitantanana ny firenena, hoy ny nolazainy.
Mikasa ny hanongana an-dRavalomanana, filoha ankehitriny, ihany koa izy noho ny Fanitsakitsahana ny Lalampanorenana Malagasy araka ny nolazainy.
Araka ny no taterin'i Avylavitra (sy ny sary nalainy mivoaka ao amin'ny flickr ) :
News2Dago indray manontany raha izao no atao hoe demaokrasia:
Madagascan manotany izay hitranga:
“…Ny mahalasa fanontaniana ahy dia ny tanjaky ny mpaohana azy any anivon'ny tafika sy ny mpitandro ny filaminana? Hatramin'izao loha di atsy misy ahafantarana mihitsy ny fifandanjan-kery misy eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Fitsapana lehibe ho an'i Andry Rajoelina noho izany ny fanambarana nataony. Tsy isalasalana kosa ny fanohanana azony avy amin'ny antoko politika fa raha izy irery manko tsy hahatontosa izao fifanandrinana izao. Mbola mety hafana ny raharaha amin'ity faran'ny hernandro ity. Raha ny lôjika dia tokony handefa taratasy fampisamborana an'i Andry Rajoelina i Marc Ravalomanana, ary tokony ho gadra anio ihany ilay zalahy io. Fitsapana lehibe ny androany: hanoa azy ve ny tafika?”
Nandritra izany fotoana izany dia nitety ny tanàna any amorontsiraka ny filoha Ravalomanana ary ny nandehanany farany dia tany Nosy Be, ary araka ny nolazain'ny sampan-tseraseran'ny Prezidansa, dia nanao izao kabary manaraka izao izy tany:
“Tonga eto aho handiso ny tsaho lazaina any Antananarivo fa may avokoa i Madagasikara manontolo. HItako fa mitohy tahaka ny andavanandro ihany ny fiainana. Hiasa hatrany isika hampandrosoana ny firenena. Tonga eto aho hijery ny fahasimbana vokatry ny fandrobana sy ny fandoroan-trano. Efa arahinay maso akaiky ireny mpanakorontana ireny hahatsapanareo fa misy fanjakana mijoro eto Madagasikara. Ny tsikaritra ankapobeny dia tahaka izao: mipoitra tampoka avy any ry zalahy hanakorontana. Hajaintsika ny Lalampanorenana sy ny ara-dalàna ka tsy olona nandroba sy namaky trano no hanakorontana ny firenena. Malahelo dia malahelo tokoa izahay tamin'ny zava-nitranga, fa hiasa miaraka indray isika amin'ny fanarenana ny toe-karem-pirenena.”
Yahoo Forum indray no hahitana ny fihetsika isan-karazany miainga amin'ny fahagagana (fahatezerana) ka hatramin'ny hatramin'ny horakora-kafaliana tamin'izay nitononan'i Andry Rajoelina ny tenany ho filoha. Misy ny mahita ny fihetsiky Rajoelina ho fitadiavam-pahefana hiarovanany tombotsoany sy ny harenany. Faly kosa ny hafa. ny hafa indray mbola mieritreritra fa sao voafitaky ny mpanao politika indray ny vahoaka.
“Inona no hatao mba tsy ho lasa sorona noho ny tombotsoa manokana ny ahoaka malagasy. Saino anie izao: hahazoany fahefana dia niantsoantso demaokrasia ny sasany ary dia nahasahy nanao asa fampihorohoroana ary dia mandray an-keriny ny fahefana!!!”
Manontany momba ny fifidianana eto Madagasikara kosa ny hafa ao amin'ny Sobika forum:
“Ahoana kosa hoy ny vahoaka Malagasy? Tsy afaka hitsara aho fa tokony hitaky fifidianana ny TGV? Ny (fifidianana demaokratika) ihany no manome antoka ny ampitson'ny mpanao politika. Efa tamin'ny andro taloha izany misora-tena ho izao na izatsy izany…”
ambositra:nilamina ny meeting t@sabotsy; liambaovao ny olona fa mahatsiaro “tany lavitra andriana”
02 Febroary 2009, 16:22
meeting ambositra 04 02: nilamina; tsy mitovy hevitra ny “olona toteny”@ tokony hialan’ny chef de region na tsia.
04 Febroary 2009, 14:32
Misaotra amin ny vaovao alefanareo fa ny tena moa aty atany lavitra aty ka raha tsy misy anareo mandefa vaovao dia maizina .
08 Febroary 2009, 14:22
ambositra:nisy renfort miaramila(FIP) t@ 07.02 dia naato ny meeting; milamina ny tanàna.
10 Febroary 2009, 10:38